ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ NLD | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ NLD
ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ NLD
Posted by koaung on Mar 27, 2010 in 2010/2012/2015 Election, Politics, Issues |6comments
ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကြည့် ရွေးကောက်ပွဲကို အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားဝင်တယ် မ၀င်ဘူးဆိုတာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ မဲပေးပိုင့်ခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘက်မှာ အင်အားပြည့်ရှိနေပြီး မဲပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေကြကြောင်းပါ။
Yes, people will give 110% vote for NLD if the party decided to register for election. NLD need to pledge that it will abide by the rule set by Military. NLD under no illusion must say that it will recognize the leading role of Junta in Parliament, forget about crimes committed by General, accept/ support the generals` decision to declare state of emergency, subsequently agree to go to jail if it has voiced disapproval of military`s decision. The junta is just legalising the military grip on Burma. People of Burma will also boycott the election. Although we are upset not being able to give vote for NLD, we should understand that Junta had forced NLD to boycott the unjust election. I hope my explanation here will console some section of public who do not seem to understand about the trick created by Than Shwe. All are cordially welcome to comment on this light explanation given in my good faith.
ရေနံသာကိုအောင် ဆိုတဲ့ဆရာရေNLDနဲ့ပက်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသေသေချာချာတစ်နိုင်ငံလုံးလိုက်စုံစမ်းထားပုံရတယ်နော်—ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့နုလုံးသားထဲမှာဖိနှိပ်မှုတွေလွတ်မြောက်ဖို့၊အာဏာရှင်စနှစ်ကုန်ဆုံးဖို့၊ပြည်သူအာလုံးရဲ့စားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကျိုးမကြည့်တဲ့ အမေစု ခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ဘဲရှိတာပါ။ဒါပေမယ့် သေသေချာချာစီမံအကွက်ဆင်ထားတဲ့ လံကြုတ်ပြိုင်ပွဲကြီးကို ၀င်ပြိုင်လိုက်ရင် ပြိုင်တဲ့လူကရူးနေလို့ပါဘဲ။ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲကြိုးစားမောင်းနှင်မဲ့ခေါင်းတွဲမပါဘဲဒီမိုကရေစီ မီး၇ထားကြီးကိုဘယ်လိုမောင်းကြမလဲ။
အားလုံးနီးပါးက NLD ကိုပဲ ထောက်ခံချင်ကြပုံရတယ်
ကျနော်တစ်ခုစဉ်းစားမိတာတော့ သူတို့ ခုလုပ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက ဘယ်လောက်ပဲ ယုတ်မာမှုတွေ သုံးထားပါစေ.. ဒီမိုကရေစီအတွက် လမ်းစတစ်ခုစတင်ပွင့်လာတာလို့ မြင်ပါတယ်..ဒီလိုသာမလုပ်ပေးခဲ့ရင် ခုချိန်ထိ ကျနော်တို့ သူတို့လက်အောက်မှာ ဒုံရင်းဒုံရင်း ဆက်နေသွားရမှာပါပဲ
ခုလိုဖြစ်လာတာကို ကောင်းတယ်လို့လည်းမတွေးနိုင်သလို မကောင်းဘူးလို့လည်း တွေးလို့မရတာ အမှန်ပါပဲဗျာ
NLD က မဲဝင်အရွေးမခံတော့ပေမဲ့ NLD ထဲက လူအချို့က ပါတီထောင်ပြီး မဲအပေးခံကြမှာပါ ။ ပါတီနာမည်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုလို့ပေးထားပြီး logo ကတော့ ခမောက်ပုံပါ ။ အန်တီစုရဲ့ဆန္ဒအရတစ်ချို့သော NLD ပါတီဝင်တွေဟာ မဲပေးပွဲမှာမပါဝင်ခဲ့သလို ပါတီဖွဲပြီးအရွေးခဲ့ဖို့လည်း မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး ။တစ်ချို့သော စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြနေတဲ့လူတစ်ချို့စုစည်းပြီး အမျိးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတည်ထောင်ပါခဲ့ပါတယ် ။ အဖွဲ့နာမည်သာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း ပါတီဝင်တွေကတော့ NLD ပါတီဝင်တွေပါပဲ ။ ခမောက်ပုံလေးကိုပဲ မူမပြတ်အသုံးပြုနေသေးတာတွေ့ရပါတယ် ။
အီးတုံးရဲ့မှတ်ချက်ကို နဲနဲဖြည့်စွက်ပါရစေ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ အန်န်ဒီအက်ဖ်သည် အန်န်အယ်လ်ဒီကနေ ပဲ့ထွက်လာတဲ့ ပါတီညီလာခံရဲ့ အားလုံးသဘောတူဆုံဖြတ်ချက်ကို အာခံပြီး ထွက်လာတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ခမောက်ကိုသုံးတာကိုလည်း အန်န်အယ်လ်ဒီက တရားဝင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို အန်န်အယ်လ်ဒီလို့ မသတ်မှတ်တော့ပါဘူး။ အီးတုံးပြောသလို ဒေါ်စုရဲ့ဆန္ဒအရ တချို့သော အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေဟာ မဲပေးပွဲမဝင်ဆိုတာ အချက်အလက်အရ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ အများစုက ဒေါ်စုနဲ့တသားထဲရှိပြီး အနည်းစု (အရေအတွက်ကနည်းလို့ ခွဲထွက်အစား ပဲ့ထွက်လို့ပဲ သုံးနိုင်ပါတယ်) ကသာ အန်န်အယ်လ်ဒီရဲ့ ဩဇာအရှိန်အဝါကို မလိမ့်တပတ်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုက အန်န်အယ်လ်ဒီမရှိလို့ ဘယ်သူ့ကိုမဲပေးရမှန်းမသိရင် မပေးကြနဲ့လို့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခိုင်းထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရ အန်န်အယ်လ်ဒီက စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ် ပါတီတခုရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ဖို့ကြေငြာချက်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ စစ်ကျွန်ဘဝကို တရားဝင်ကျရောက်စေမဲ့ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲကို နားယောင်နေမဲ့အစား အန်န်အယ်လ်ဒီရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တတ်စွမ်းသ၍ ပူးပေါင်းအားဖြည့်ပါလို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ်။